Astaanta Qoraxda Duusha “The Winged Sun-Desk” - Land Of Punt
Astaanta loo yaqaan “The Winged Sun-Disk” waxay noqonay qoraxdii oo balaal yeelatay, waxaana lagu xidhiidhiya ilaaha “Horus” oo noola wakhtiyadii hore ee fircooniyiintu Masar joogen. Waxaa iyaguna ka barakaysan jiray quruumo hore oo kamid yihiin barshiyankii iyo assiriyankii. Waa astaantan ka booban qorax labo baal’leh iyo laba mas oo dhusa ka saaran. Fircooniyiintu waxay astaanta u yaqiinen inuu iska leeyahay ilaahi Horus (Aboodiga); waxay ku warheleen Horus oo samada kasoo degaya oo balaal leh tuurtana ku sida Nekhebet iyo Uatchit oo ahaa labo hablood oo ilaahyo iyaguna ahaa lakinse markan uu qoraxda kasoo degayo masas isubadalay. Xaga maamul Nekhebet & Uatchit waxay u xilsaarayeen ilaalinta Masarta Sare (Sudan) iyo Masarta Hoose.
“Horus(Aboodi), badbaadiyihii dhashay is aan caadi ahayn “hooyadii laguursan” wuxuu aduunka yimid inuu ka guulaysto cadowgii ilaahi guud ee Ra. Horus wuxuu isubadalay daawe laba baala leh tuurtana kusita laba dhadig oo ilaahyo lagu sheegi jiray wakhtigii fircooniyada shabahooduna ahaa masas, waa Nekhebet iyo Uatchit. Guushii Horus iyo labda dhadig wuxuu amray Thoth oo ahaa ilaaha sirta qarsoon inuu geeyo Nekhebet & Uatchit meelkasta oo Ra lagu xuso Masartii hore” Thomas Milton Stewart
Dhinaca cilmi symboliga, astaanta “The Winged Sun-Desk” waxay ka turjumay ruuxda oo samada loo dheelmiyo oo ay kalkaaliye u yihiin labadan mas, labadan marka maamulkooda kale laga yimaado waxay kala xambaarsan yihiin xikmada iyo cilmiga aad samada la tegaysid.
“Waxaynu ku turjumikarnaa daawaha labada baalal leh “the winged Sundisk” astaan ka turjumay dheelmi rasmiya oo lagu gaadhyo samada sare iska nadiifin dunuubta iyo masida dunida iyo ugu danbaysta oo lala midoobo ii ina abuuray.”
Xeel dheereyasha cilmiga fircooniyiinta waxay kuugusoo uruurinayaan in sixiroolayashi reer fircoon u adeegsan jireen astaantan qoraxda labada baal’leh cilmi noockale ah oo ay ugu yeedhi jireen Jinnka nooc kamid ah.
“‘Marka lasoo toosinayo shayadiinta hawada “element of air” waa rukubyada mihiim ka ah sinxigan duulaya na astaan u yahay sidaa awgeed sinxi jiho loo jeediyey kasoo ah sinxiga ballalsha leh wuxuu fududeeya soo toosinta cifriidyada xoojiyaana awooda sixirka –Hope, Murry, Practical Egyptian Magic
Astaanta “the winged sun” wakhtigan aynu noolahay ururo gaar ah baa isticmaala sida masooniyada, Tifoosiyiinta “Theosophists” iyo Rosokooriyanka “Rosicrucians”
“Asliyan astaanta sinxiga duulaya “The Winged” waa astaan ay iska leeyihiin Rosikruusiyanku “Rosicrucian symbol”l, inkasoo ay Iluminaatigu sheegtaan inay astaantanu kasoo jeedo Masartii hore, waxaan shaki kujirin inay asttanu tahay ruuxda oo isnadiifisay dulmina ka dheeryahay oo dib ula midoobay meeshi ay markii hore katimid waa samada sare eh.” -Swinburne, Clymer, The Rosicrucians Their Teachings
Si’daynu hore u xusnay, Horus ayaa baalal uu kuduulayo dunida kuyimi siduu cadowga kacdoonka wada ee kasoo horjeestay ilaaha “RA” u burburiyo, waxaa Horus u saamaxay inuu kasoo gaadho afganbiga lagu wado xukunka “RA” waxaana baalasha soo siiyey “RA”/”BAAL” (qofkasuu ma uur ku baal’la) sidaasuna ku baajay kacdoonki.
Cilmiga symbooliga baalasha “Horus” waxay astaanta u yihiin duulis cajiiba iyo xawaare, iyadoo sidadban u xusayo Horus ayaa warshadaha sameeya baaburta, diyaarada iyo wixii xawaare loo nisbeeyo uqaatan astaan qoraxada laba baal leh. Astaantan cilmigeedu waa badan yahay waxaana iska leh ururada aaminsan khuraafadka Ibliis. Astaanta “The Winged Sun-Disk” oo micno badan loo turjumo baa ku arkaysaa fagaareyaal badan oo ay leeyihiin ururada aminsan afkaarta Ibliiska kasoo baxay.
astaanta qoraxda astaanta qoraxda duusha baal Iluminaatiga iluminati MAS maysooniyada qorax RA the winged sun desk ururada hadafka qarsoon leh